Androany amin'ny lalao mampiankin-doha amin'ny Android, Pixelman Free | Androidsis
Tongasoa eto amin'ity fizarana ity Izahay dia manandrana manodidna anao ny lalao fiankinan-doha tsara indrindra ho an'ny Android. Ny lalao sasantsasany izay, amin'ny ankapobeny, dia fehezin'ny lalao tsotra indrindra nefa tsy misy karazana fampisehoana amin'ny sary miaraka amina tanjona tokana hahatongavana hatreo amin'ny fotoana voalohany hahatongavana eo an-tampon'ny podium na High Score.
Amin'ity tranga ity dia te-hanolotra lalao maimaim-poana ho anao Android aho izay mamaly ny anaran'ny Pixelman maimaim-poana ary inona amin'ny fomba Retro tanteraka izay mitondra antsika hiverina amin'ny vanim-potoana volamena amin'ny lalao video. Lalao iray, toy ny mahazatra, miaraka amin'ny dokambarotra mifangaro ao amin'ny kinova Maimaimpoana na dia miasa tanteraka aza, izay hahafahantsika manafoana amin'ny alàlan'ny fahazoana ilay kinova voaloa.
Inona no atolotry ny Pixelman Free ho antsika Android?
Amin'ny fitsipika, ny fomba filalaon'ny Pixelman maimaim-poana Ny fomban'ny lalao mikasika ny fitazonana ny toetra amam-panahy, amin'ity tranga ity Pixelman izay tsy maintsy manavotra ny zava-manan'aina rehetra izay mangataka fanampiana amintsika ary voafandrika eo an-tampon'ireo tranon'ny tanàna tsotra sy tranainy io.
Sahala amin'izany tsy maintsy mamonjy olona, ​​alika, saka ary ireo endri-tsoratra rehetra mangataka fanampiana isika, Fisorohana ny fifandonana amin'ireo tranobe ary miaraka amin'ireo fiaramanidina, angidimby ary tetikasa hafa mivoaka hitsena anay.
Ny maha samy hafa an'ity lalao ity amin'ny lalao hafa amin'ny fomba toy ny Flapy Bird, dia ankoatry ny fifehezana amin'ny alàlan'ny fikasihana ny efijery ny fantsom-pifandraisana, ankoatr'izay Hanana ny hetsika Swipe miakatra na midina isika mba hanandramana hampihetsika ny hafainganam-pandeha somary haingana kokoa na dia amin'ny vidin'ny fametrahana mazava tsara aza ny hetsika.
Tsy misy fisalasalana Pixelman maimaim-poana iray amin'ireny lalao mahazatra ho an'ny android Tena tiako izy ireo manokana, izay mety hilalao na aiza na aiza misy antsika nefa tsy mila manana fotoana be dia be.
Raha tianao ity karazana ity lalao mampiankin-doha amin'ny android, tsotra amin'ny misy azy ireo ary miaraka amin'ny mekanika lalao tena tsotra, aza misalasala ary manandrana Pixelman Free satria azo antoka fa ho tianao izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Lalao mampiankin-doha ho an'ny Android: Androany, Pixelman Free